Trump oo taageeray go’aankii Putin kusoo eriyay 755 Diblumasiyiinta Maraykanka ah! • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Trump oo taageeray go’aankii Putin kusoo eriyay 755 Diblumasiyiinta Maraykanka ah!
Trump oo taageeray go’aankii Putin kusoo eriyay 755 Diblumasiyiinta Maraykanka ah!
August 11, 2017 - By: Khalid Yusuf
Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa markii ugu horeysay ka hadlay go’aankii Ruushka dalkooda uga soo saareen in ka badan 750 diblumaasiyiintii ka shaqeyn jirtay Safaarada Maraykanka ku leeyahay Moscow.
Go’ aanka uu qaatay Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin muddo laga joogo labo todobaad kahor ayaa ahaa mid looga jawaabayey cunaqabateynta horleh ee Baarlamaanka Maraykanka kusoo rogay Ruushka oo lagu eedeeyey farogelintii uu ku sameeyey doorashadii Maraykanka ee sanadkii hore.
Trump oo lagu xanto inuu xiriir qarsoodi ah la leeyahay Ruushka ayaan tan iyo bishii July 30keedii markii Putin go’ aankan ku dhawaaqay aan wax war ah kasoo saarin arrintan. Donald oo lagu yaqaan inuu wax walba uga jawaabo bartiisa twitterka ayaa gebi ahaan ka gaabsaday illaa iyo hada inuu ka hadlo diblumaasiyiinta Maraykanka ee laga soo cayriyey Moscow.
Donald Trump oo hada fasax 17 maalmood ah ku jooga deegaanka uu ku leeyahay
Bedminster ee gobalka New Jersey, ayaa saxaafada hadal uu siiyey khamiistii shalay ku sheegay in uu soo dhaweenayo go’ aanka Putin kusoo tarxiilayo diblumaasiyiinta Maraykanka!
“Waa soo dhaweenayaa arrintaasi, maadaama ay noo baajin doonto lacag badan oo nooga bixi jirtay mushaharka diblumaasiyiintaasi joogay Moscow…” ayuu yiri Trump oo si la yaableh uga hadlay arrinta oo uu in muddo ah ka gaabsanayey inuu soo hadal qaado.
Warkan kasoo yeeray Trump ayey durbaba dhaliileen diblumaasiyiinta Maraykanka qaarkood, walow Wasaarada Arrimaha Dibada iyo Xoghayaha Dibada Rex Tillerson aysan si rasmi ah weli arrintan uga hadlin.
Hase yeeshee saraakiil iyo diblumaasyiin ka tirsan Wasaarada Arrimaha Dibada oo qaarkood la hadlay Saxaafada ayaa sheegay inay argagax iyo la yaab ku noqotay hadalada Trump.
Madaxweynaha Maraykanka ayaa looga bartay todobaad walba inuu ku dhawaaqo hadal qalafsan oo waji gabax ku rida Wasiiradiisa iyo diblumaasiyiinta Maraykanka ee caalamka ku sugan oo iyagu intooda badan ka fikir duwan Madaxweynahooda.